Warbixin. 5 Arrimood oo Loo Aaneynayo Dib u Dhaca “Xisbigii. Nabad iyo Nolol | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Warbixin. 5 Arrimood oo Loo Aaneynayo Dib u Dhaca “Xisbigii. Nabad iyo Nolol
July 29, 2018, ayaa Ra’iisul-wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed ‘Khadar’ oo Khudbeynayay uu sheegay in ay soo wadaan Xisbi weyn oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo.
Waxaa uu tilaamay in Xisbigaas uu noqon doono Xisbiga Xisbiyada waxaana guddoomiye ka ahaan doona, ayuu yiri, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Mahdi oo la hadlayey Axsaabta, ayaa waxa uu yiri “Xisbiyada qaar waxa ay ka dhawaajiyeen in xukuumadda looga fadhiyo iney dhisato xisbi, xisbi weyn, Illaaheybaa weyne ayaan soo wadnaa, oo xisbigii xisbiyada ah, oo madaxweynaheennu hormuud u yahay, siyasaddii guushii Febraayo uu ku hoggaaminaayo, marka hala iska jiro, yaan la is dhiganin xisbiyada is-diiwaan geliyay , yaan la idin gaadin goor barqo ah adinka oo waaberiistey!.”
Sanad iyo labo bilood ka hor ayey baalaxooftadaasi(booto) ahayd, illaa iyo hadda maxaa xisbigii loo sameyn waayey? Siyaasiyiinta mucaaradka maxaa loo laab kiciyey oo axsaab siyaasadeed iney sameeyaan lacago farabadanna ay ku bixiyaan loogu kallifay, haddii aaney Nabad iyo Nolol daacad ka ahayn in doorasho qof iyo cod ah dalkan ka dhacdo 2020? Halkey sartu ka qurun san tahay? Mise waxaa jira xeelado qarsoon iyo muddo korors aan tabaheeda lagu baraarugsaneyn?
Markii aan fakaray oo xaajada dhan walba aan ka rogrogay waxaa ii soo baxday 5-sababood oo Nabad iyo Nolol u diiddan iney ku dhawaaqaan xisbi matala ayna la yimaaddaan saaxadda siyaasadda dalka:
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul-wasaarihiisa Xasan Kheyrre oo Aan Isku Waafaqsaneyn nooca Xisbi iyo Cidda Madax Ka noqoneysa
Cidna kama qarsana hamiga iyo hanka ku jira Ra’iisul-wasaare Kheyrre inuu dalka Madaxtinimadiisa u tartamo 2020, socdaalkii uu ku gaaray Galmudug, habeen uu dhalinarayada Gaalkacyo kula hadlayey xaflad lagu soo dhaweynayey Juley 10, 2019, ayaa afku soo xaday waxa uurkiisa ku jira, dhacdo aan dad badani ku baaraarugsaneyn laakiin anigu aan si gaar ah hoosta uga xariiqday, wiil dhalinyaro ah oo farshaxamiiste ah ayaa waxa uu guddoonsiiyey, sawirka Kheyrre oo gacan ku sameysa oo loo sameeyay si farshaxan leh oo aad u heersarreysa, Ra’iisul-wasaaruhu farxad ayuu kala badbatay, makarafoonka ayuu qabsaday hadal kooban ayaa isagoo sawirkiisa kor u haya uu yiri: “Hadiyadda waad ku mahadsanihiid reer Gaalkacyo, madaxweynaha Mustaqbalka iska fiiriya.”, marlabaad ayuu hadalkii kusoo noqday isagoo farta ku tilmaamaya oo hadalkii ka dhigaya in wiilkan dhalinyarada ah ee farshaxamiista ah uu noqon karo madaxweynaha mustaqalka.
Dhanka madaxweyne Farmaajo shaki kuma jiro inuu doonayo inuu xilli kale isku soo sharraxo xilka madaxweyne, waxaa tusaale kuugu filan; inuu August 1, 2019, iska kansalay dhalashadiisii Mareykan, taas oo ka dhigan inaanuu dalka dhinacna uga socon.
Muddo Kororsi Ka Dhex Guuxaya
Xilligan waxey ahayd in waxyaabo badan la dardargeliyo, dastuurka la dhammeystiro, afti dadweyne loo diyaariyo, axsaabta si rasmi ah loo kala xulo, sharciga doorashooyinka oo baarlamaanka laga meel mariyo, amniga la dardargeliyo oo goobo badan oo dalka ka tirsan loo diyaaro iney doorasho ka qabsoomi karto, arrimahaas oo dhan gaabis ayaa ku jira, oo si caga jiid ah ay waxwalbaa u socdaa, haddii sidaa lagu sii socdo, xaalku waxa uu imaanayaa labo arrimood in sidii Nabad iyo Nolol ay ku yimaaddeen wax loo doorto iyo in muddo kororsi ugu yaraan labo sanno ah baarlaamaanka la marsiiyo, arrintan dambe ayaana u fudud sida muuqata, oo awoodda ay isku halleynayaan waa xildhibaannada ay sida gaarka ah gacanta ugu hayeen ee samaan iyo xumaan aan marnba caasin ee golaha wasiirrada u badan, waxaana hubaal ah haddii aan la helin awood siyaasadeed iyo mid maamul goboleedyadu ka midaysan yihiin oo ka dhiidhiya isku day kasta oo muddo kororsi ah.
Muquuninta Maamul Goboleedyada oo Ulajeeddo Leh
Nabad iyo Nolol waxey dhibaato u arkaan jirintaan maamul goboleedyo xooggan oo amarkooda diidi kara, maadama doorasho kasta oo dalka ka dhacada ay dowlad gaboleedyadu asal u yihiin, haddii muddo korosi la sameyn lahaa ay lagama maarmaan ah in marka hore ogolaanshiyo laga helo dowlad goboleedyada lagana dhaadhiciyo xaalka oo aaney diidmo kala horimaan, sidaa darteed; waxaa lagama maarmaan noqotay iney dagaal toos ah oo aan gambasho lahayn ku qaadaan is bahaysiga awoodda badan ee dowlad goboleedyada oo qaar ka mid ah ay hadda gacanta ku dhigeen, kuwana ay ku fashilmeen, kuwo kalana ay hadda u hanqal taagayaan oo waxwalba ay u hurayaan maadama mustaqbalkooda siyaasadeed ay ku xireen kolba sida ay gacanta ugu dhigaan maamul goboleedyadaasi.
Siyaasiyiinta Hibada leh ee waxgalka ah oo Axsaab Mug iyo Miisaan Leh Furtay
Mararka qaar in runta la sheegaa wey fiican tahay, axsaabta hadda dalka ka jirta, waa kuwo awoodooda aan la iska indho tiri Karin, haddii maanta doorasho loo dhaqaaqo waxaa hubaal ah in xukuumadda Nabad iyo Nolol dharaar cad banaanka lagu diyaro, maxaa yeelay; siyaasiyiinta dhalinyarada ah ee mucaaradka ah waxey u badan yihiin qaran joog, haddii doorasho loo dareero waxey heli karaan dadka ugu badan ee codeynaya oo si toos ah iyo si dadbanba u garab taagan, gaar ahaa marka aad hadda ognahay sumcaddii iyo xiisihii madaxweyne Farmaajo iyo xumaddeediisa loo hayay ay si weyn u luntay, hadda waxey dadku doonayaa oo qura qof ay yaqaannaan oo qaranka la joogay baahidoodana si wanaagsan u fahmi kara.
Fashilka Xukuumadda Khayrre ee Ammaanka Dalka
Kadib qaraxyadii is xigxigay ee ay dadku ku dhammaadeen iyo qarixii weynaa ee Soobbe ee October, 2017 iyo deegaanno badan oo weli ka maqan caganta dowladda ayaa keentay in shay looga garaaabo oo dadku ay wanaag uga sheegi karaan xukuumadda Nabad iyo Nolol aaney jirin, marka laga yimaaddo mushaar bixin oo wax sidaa u sii buuran ah aan ahayn. Haddii aan eegno guulaha xukuumadihii ka horreyay Nabad iyo Nolol waa kuwo waaweyn oo ishu ay qaban karo, tusaale ahaan; xukuumadihii sheikh Shariif dalka waxey ka hirgeliyeen doorasho si nabad ah uga dhacda gudaha dalka, halka xilligii Madaxweyne Xasan Sheekhla gaaray guulihii ugu waaweyna oo la dhisay maamul goboleedyada hadda uu dalku ku dhisan yahay intooda badan waqtigiisii la hirgeliyay.
Si kastaba, dalkan waxa uu u baahan yahay in la isku run sheego, madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa waxaa looga fadhiyaa xisbigii mudada sanadka ah iyo labada bilood la sugayay, si loo hubiyo in xukuumadda ay daacad ka tahay in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalkan ka dhacaan marka la gaaro 2020.
W/Q: Khadar Xuseen Maxamed